Ukusebenza Izimiso Dryair Imikhiqizo - Hangzhou DryAir Ukwelashwa Co., Ltd
Ngo izinqubo zokukhiqiza, umphumela yokwenziwa umswakama kwimikhiqizo bekulokhu kuyinkinga njalo ...
Air dehumidification kuyinto isixazululo iphila futhi ingatholakala izindlela eziningana: Indlela yokuqala is ukupholisa umoya ngezansi namazolo yayo iphuzu nokususa nomswakama ngokumunca ukufingqa. Le ndlela iphumelela ngaphansi kwezimo lapho iphuzu amazolo kuyinto 8 - 10 o C noma ngaphezulu; indlela wesibili iyavuleka nomswakama ngokumunca material desiccant. Imicu yotshani bobumba ka elifakwe ukungena nakwamanye amazwe ejenti hygroscopic okwenziwa ku abagijimi lezinyosi-like. Isakhiwo dehumidification ilula, futhi ingafinyelela -60 o C noma ngaphansi ngokusebenzisa inhlanganisela olukhethekile desiccant izinto. Indlela ukupholisa siyasebenza ngoba okuncane noma lapho izinga umswakama is ngokulinganisela elawulwa; ngoba izicelo emikhulu, noma lapho izinga nomswakama kumele alawulwe ezingeni eliphansi kakhulu, desiccant dehumidification liyadingeka.
DRYAIR Systems ukusebenzisa ukupholisa indlela ubuchwepheshe, kanye namasondo desiccant isakhiwo yeselula. Njengoba kuboniswe sibalo, motor ushayela isondo desiccant ukujikisa izikhathi 8 kuya kwezingu-18 ngehora, kuthi ngokuphindaphindiwe ubamba umswakama ngokusebenzisa isenzo kokuzalwa ukunikeza emoyeni elomile. Leli sondo desiccant ihlukaniswe endaweni umswakama kanye endaweni ukuvuselelwa; emva umswakama emoyeni isuswe umswakama endaweni isondo, lo Blower ithumela emoyeni elomile ekamelweni. Leli sondo kokuba ugxile amanzi uzungeza endaweni ukuvuselelwa, futhi emoyeni bese kutsha (umoya oshisayo) uthunyelwa phezu isondo kusukela isiqondiso reverse, exosha amanzi, ukuze isondo ungaqhubeka ukusebenza.
Umoya ezivuselela uyabaselwa enamaphutha umusi heater noma heater kagesi. Ngenxa izakhiwo olukhethekile super abicah gel futhi yamangqamuzana-ngesihlungo e isondo desiccant, DRYAIR dehumidifiers ingafinyelela dehumidification okuqhubekayo ngaphansi esiningi ivolumu emoyeni, futhi nezidingo aphansi kakhulu umswakama okuqukethwe. Ngokusebenzisa ezifanayo futhi inhlanganisela, okuqukethwe umswakama emoyeni iphathwa kungaba esingaphansi 1g / kg emoyeni elomile (elilingana amazolo iphuzu lokushisa -60 o C). DRYAIR dehumidifiers ukuletha ukusebenza esihle kakhulu ngisho kangcono ebonakaliswa ongaphakeme umswakama ezindaweni. Ukuze kulondolozwe izinga lokushisa esitebeleni lomoya ezomile, kuyancomeka ukuba kuphole noma ashisise emoyeni dehumidified ngokufaka imishini air-conditioning noma i-heater.
2.Principle of imishini ukuphathwa VOC:
Kuyini VOC concentrator?
VOC concentrator zingahlanza ngempumelelo futhi sigxile VOCs laden emoyeni ukusakaza amandla ngenxa izimboni ezimbonini. Ngu kokuba kuhlangene udoti noma kuphela imishini yokutakula, kokubili izindleko sokuqala kanye namasistimu okusebenza lonke uhlelo VOC abatement kungenziwa kakhulu ziyancipha.
VOC lokuhlushwa Rotor wenziwe lezinyosi iphepha wezinto njengoba substrate, lapho ephezulu Silica zeolite (Yamamolekhula ngesihlungo) is elifakwe. Rotor uhlukaniswe 3 esishintshashintshayo ezifana inqubo, desorption kanye nokupholisa esishintshashintshayo yi bezinhlamvu isakhiwo nokushisa ukumelana air uphawu. Rotor njalo ijikelezwe ngaleso elikhulu ijubane ukujikeleza ngo nenjini elithambekele ekujabuliseni.
Amakhulu VOC concentrator:
Lapho VOC qeda laden igesi sihamba ngenqubo zone Rotor okuyinto ngokuqhubekayo ezijikisiwe, le zeolite incombustible e Rotor ubamba VOCs negesi ukuhlanzwa iphelile kuya ambient; VOC ugxile engxenyeni Rotor ke ijikiselwe zone desorption, lapho VOCs ugxile kungenziwa desorbed nge inani elincane lokushisa eliphezulu desorption emoyeni futhi bagxila eliphezulu lokuhlushwa level (izikhathi 1 kuya ku-10). Khona-ke, i-high kanzulu VOC igesi udluliselwa ezifanele ukwelashwa okuthunyelwe izinhlelo ezifana incinerators noma izinhlelo zokutakula; ingxenye desorbed Rotor kuyinto okwengeziwe sizungeziswe kuya zone Ukupholisa, lapho wamagatsha opholile ovela igesi lwaluyophola. Ingxenye VOC laden qeda igesi kusukela embonini sidlula indawo Ukupholisa futhi idluliselwe umzimba ukushisa noma heater sishiswa futhi ukusetshenziselwa njengoba desorption emoyeni.